အရူးမတစ်ယောက်ရဲ့ဒိုင်ယာရီ | ဥက္ကာကိုကို
Posted by oakkarkoko on September 30, 2008
Posted in: ကဗျာ.	Tagged: ကဗျာ.	Leaveacomment
အနုပညာခံစားမှုတွေ ရစ်သီတွဲခိုလို့ …….
တယော ထိုးပြခဲ့တယ် ။
အဲသလို လူတစ်ယောက်ကို ချစ်ခွင့်ရတာ
လေတိုက်ရာ လွင့်မျောနေကြတယ် ။
သိပ် အနုပညာဆန်လွန်းလှတယ် မောင်…..။
နူးညံ့သိမ်မွေ့မှု၏ အဖော်ဖြစ်သည်ဟု အယူခံလိုပါသည်…..
မယုတ်မာတတ်သော လူဆိုးတစ်ဦးသာ ဖြစ်ပါသည်။
မောင့်၏ ဆိုးမွေ ကောင်းမွေ ဟူသမျှကို
ကျွန်မက…လရောင်ကို တယောထိုးပြမည် ဖြစ်ပါသည်။
ကိုယ်စောင့်နတ်သမီးလေး ဖြစ်ရပါလို၏……..။ ။